आज नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्मकै बढीको मृत्यु – Sapana Sanjal
आज नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्मकै बढीको मृत्यु
May 19, 2021 147
Sapana Sanjal : नेपालमा चौबीस घण्टाभित्र कोरोनाभाइरसबाट हालसम्मकै सबैभन्दा बढी मृ,त्यु दर्ता गरिएको छ । पछिल्लो चौबीस घण्टामा २४६ जना सङ्क्रमितको मृ,त्यु भएको हो । यसअघि सबैभन्दा बढी २२५ जना सङ्क्रमितको मृ,त्यु भएको थियो । हालसम्म नेपालमा ५ हजार ६५७ जना संक्रमितको मृ,त्यु भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ सम्बन्धी बिवरण सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो चौबीस घण्टामा आरटीपीसीआर परीक्षणमा आठ हजार ६४ जना सङ्क्रमित थपिएको जानकारी दिए ।
उनले एन्टीजेन परीक्षणमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा १०९ मा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको बताए । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा सात हजार ९८९ जना सङ्क्रमित कोरोनामुक्त भएका छन् ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ४८६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमा भक्तपुरमा २२८, ललितपुरमा २७० र काठमाडौंमा १ हजार ९८८ जना रहेको बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य खबरका अनुसार कोरोना मानिसको डरसँग जोडिएको रोग बन्न पुगेको छ। कोरोना लाग्दैमा र अस्पताल भर्ना हुँदैमा मरिन्छ, केही हुन्छ भन्ने डर अहिले यति हावी हुँदैछ की यसले मानसिक समस्या निम्त्याइरहेको छ। कोरोना जस्तै विभिन्न महामारीहरुमा मानसिक समस्या बढ्ने गरेको मानसिक रोग विशेषज्ञ बताउँछन्।
आइसोलेसन तथा आइसीयूमा उपचारपछि निको भएका व्यक्तिहरुमा विभिन्न मानसिक समस्या देखिने गरेको मानसिक रोग विशेषज्ञ डा रितेश थापाले बताए। जसलाई चिकित्सकीय भाषामा पोष्ट ट्रम्याटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भनिन्छ। यसलाई संक्षिप्त रुपमा पिटीएसडीका रुपमा पनि चिनिन्छ।
उनी भन्छन्, ‘कोरोना भएर आइसीयू तथा आइसोलेसनमा बसेर उपचारपछि निको भइसकेकाहरुमा विभिन्न मानसिक समस्या देखिने गरेको छ। यो कुनै पनि घटनापछि यस्तो समस्या देखिन्छ।’
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गत वर्ष गरिएको लडाउनमा पनि अधिकांश मानिसहरुमा एन्जाइटी, डि ‘प्रेशनका समस्याहरु देखिएको उनी सुनाउँछन्। सामाजिक सञ्जालमा अहिले कोरोना र हार्दिक श्रद्धाञ्जली बाहेक अन्य सामग्री कमै भेटिन्छन्। कसैको लागि यो जानकारी मूलक खबर हुन सक्ला तथा कोरोनासँग लडिरहेका संक्रमितहरुका लागि भने यसले ठुलो असर गर्छ।
‘धेरै मानिस म’रेको, संक्रमित भएको समाचारहरु नै अहिले सामाजिक सञ्जालमा बढी आउँछन्। यस्तो नकारात्मक समाचारहरुले मानिसहरुमा एन्जाइटी विकास भइरहेको छ’, उनले भने, ‘संक्रमण नभएको व्यक्तिलाई पनि सामान्य खोकी लाग्ने बित्तिकै मलाई कोरोना भयो। अब मर्छु की भन्ने तनाव हुने गरेको छ।’
Prevआज कोरोनाको मृत्युमा नयाँ रेकर्ड, सयौंको मृत्यु हजारौं थपिए संक्रमित
Nextआमाले रुँदै भनिन्, छोराले मेरो मोबाइलमा उसका पासवर्ड पठायो, तर म निदाएछु देखिन बिहान त छोराको मृत्यु भैसकेको रहेछ (भिडियो)
दिल्लीमा परिक्षणका लागि पठाइएका सबै नमुना डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो विज्ञप्ती, मंगलवार कति थपिए नयाँ संक्रमित ?
न बेड पाइन्छ, न एम्बुलेन्स : आफन्त पुकारिरहेछन् भगवान
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण वृद्धिदर विश्वमै उच्च’
गाउँपालिकामा अनुदान खान यस्तो समेत हुँदोरहेछ ! किसान देबीप्रसादले दिउँसै पारे रात (1376)
पारस शाहले भने, ‘हेलमेट लगाउनु नलगाउनु मेरो मनको इच्छा हो’ (1374)
चर्चित नायिका प्रियंका कार्की सुत्केरी हुने दिन नजिकिएका बेला के भयो फेरी आयुष्मानलाई? (1295)
२ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं !!! (1071)
जतिसुकै बिजी भएपनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढिदिनु होला।। (972)
रामराम के भयो यी साना बाबुलाई ,हेर्दाहेर्दै यस्तो भयो ,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (932)
खोकी र ज्वरोभन्दा पनि यी दुई लक्षण देखुनु को-रोनाको स्पष्ट लक्षण हो, कस्ताे छ त तपाईहरुकाे स्वास्थ ? (907)
गर्भवती भएको भन्दै बधाई खाएर हस्पिटल जाँदा जब उनको पेटमा डाक्टरले भेटायो यस्तो चिज जस्ले सबैलाई बनायो चकित (883)
बुवाको कम्मरको भाग पुरै कु`हिएको छ ,छोरिहरुले ओछ्यानमै दिशा पिसाब गराउछन् ,यतिसम्म गर्छन्,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (850)
जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : नपढे तपाईँ लाई पछुतो हुनेछ ! (792)